डस्टबिनमा फालेको बच्चाको जिम्मा लिदै शिशिर भण्डारी ! मनै रुवाउने यस्तो भिडियो – ThikThak News
डस्टबिनमा फालेको बच्चाको जिम्मा लिदै शिशिर भण्डारी ! मनै रुवाउने यस्तो भिडियो
पछिल्लो समय आफ्नो युत्युब च्यानल मार्फत सामाजिक सेवा मा होमिएका एक पात्र हुन् शिशिर भण्डारी। उनले करेन्ट लागेर दुवै हात र खुट्टा गुमाएका कृष्ण ओलीका लागि ठुलो रकम सहयोग संकलन गर्न सफल भएका थिए। उनले कृष्ण ओलीका लागि लाखौ रकम उथाइदिए भने कृष्ण ओली जस्ता अरु का लागि पनि अभियन्ता बनेर लाखौ रकम संकलन गर्न सफल बने। उनी शिशिर भण्डारीले एक साना बालक जो केहि समयअघि पशुपति क्षेत्रमा राखिएको फोहोरको डंगुरमा भेटिएका थिए उनको लागि आफुले स्वत स्फुर्त सहयोग गर्दै मनकारी दाजुभाइलाइ सहयोग गर्न अपिल गरेका छन्।
स्नेही काख नामक संस्थाले अहले त्यो बालक को जिम्मेदारी लिएर पालन पोषण गर्दै आएको छ। डस्टबिनमा भेटिएको बालक करिब २० दिनको ति बालक का लागि शिशिर भण्डारीले बार्षिक २४ हजार ति बालकको पालन पोशंको लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउदै २४ हजारको सहयोग दिए। मानसिक सन्तुलन बिग्रिएर सडकमा पुगेका व्यक्ति तथा बालबालिकाको उद्दार को काम गर्दै आएको यस संस्थाले डस्टबिनमा भेटिएका बालकको संरक्षणको जिम्मा लिदै बच्चाको नामाकरण गरिदियो भबिस्य। स्नेही काखले आफ्नै बच्चा जसरि जिम्मा लिदै फोहोरको थुप्रोमा भेटिएकै दिनदेखि आमाको जिम्मेवारी निभाउदै आएको छ
यसैबिच कलाकार तथा युट्युबर प्रस्तोता शिशिर भण्डारीले बच्चाको लागि हरेक बर्ष २४ हजार सहयोग गर्ने गरि बचन दिएका छन्। पछिल्लो समय सामाजिक काममा समेत लागेका उनले बालकलाई काखमा लिदै मायाले चुम्बन गर्दै भावुक बनेर सहयोगको अपिल समेत गरे। हेर्नुस बिस्तृत विवरण भिडियोमा
प्रधानमन्त्री ओलीलाइ भेट्न पुगे अशोक दर्जी ! सुनाए गीत, बढ्दै क्रेज ( भिडियो सहित )
Previous Article रबि लामिछाने र रमेश प्रसाईको भेट , रमेश प्रसाइले गरे रविको अस्पताललाई सहयोग ( भिडियो )
Next Article उदाहरणीय श्रीमान ! श्रीमतीलाई आफ्नै मृगौला दिएर ज्यान बचाउने बाबुराम ( भिडियो )